HomeHoryaalka IngiriiskaTottenham Hotspur oo isku diyaarineysa inay dalab ka gudbiso Wolves Adama Traore.
January 25, 2022 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay dalab cusub ka gudbiso weeraryahanka Wolverhampton Wanderers Adama Traore .
Isbaanishka ayaa la filayaa inuu u aqoonsaday Antonio Conte inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, iyadoo tababaraha Spurs uu qorsheynayo inuu u beddelo garabka midig.
Tottenham ayaa la fahamsan yahay inay 15 milyan oo ginni ku dalbatay Traore oo ay Wolves soo diiday maalmo ka hor, laakiin The Athletic ayaa ku warameysa in Lilywhites ay hadda la soo laaban doonto dalab la hagaajiyay
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in dalabka miiska loo saari doono “maalmaha soo socda”, Wolves ayaa wali dalbanaysa lacag dhan £20.9m si ay u cunaqabatayso iibka bartamaha xilli ciyaareedka iyada oo ay sii socdaan wadahadalada u dhexeeya labada dhinac.
Imaatinka Traore waxay u badan tahay inuu arko Matt Doherty inuu ka tago kooxda ka hor maalinta Isniinta, halka Dele Alli , Tanguy Ndombele , Bryan Gil iyo Giovani Lo Celso ay sidoo kale sii wadi doonaan in lala xiriiriyo bixitaan.
Traore ayaa kaliya hal gool dhaliyay 20 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan waxana uu haatan ku jiraa 18-kii bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa Molineux.